ဘဝမှတ်တိုင်: GridinSoft Trojan Killer 2.2.0.4 + Key & Crack
Trojan ဆိုတာလည်း Virus ထဲမှာ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ ပြသာနာကောင်တမျိုးပါဘဲဗျာ။ Trojan ထဲမှာမှ ကိုယ့်ရဲ့ Data တွေ Account တွေကို ရန်ရှာနိုင်တဲ့ Hacker တွေဆီက Trojan ဆိုရင်တော့ ကြောက်စရာ အကောင်းဆုံးဖြစ်သွားပြီပေါ့ဗျာ။ ဒါကြောင့် Trojan တွေကို နိုင်နိုင်နင်းနင်းသတ်နိုင်တဲ့ GridinSoft Trojan Killer နောက်ဆုံးထွက် Version ကိုတင်ပေးလိုက်တာပါ။ Trojan Killer က Trojan အပြင် အခြား Virus တွေဖြစ် တဲ့ Adware , Spyware , Malware တော်တော်များများ ကို Remove လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အမြဲတမ်းအသုံးပြု နိုင်အောင် Full Version အဖြစ် Serial Key နဲ့ Crack File နှစ်မျိုးလုံးထည့်ပေးထားပါတယ်ဗျာ။ အဆင်ပြေ တာနဲ့သာသုံးကြပါနော်။ အသေးစိတ်ကိုအောက်မှာဆက်လက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
Trojan Killer is designed specifically to disable/remove Malware without the user having to manually edit system files or the Registry. The program also removes the additional system modifications some Malware carries out which are ignored by some standard antivirus scanners. Trojan Killer scans ALL the files loaded at boot time for Adware, Spyware, Remote Access Trojans, Internet Worms and other malware. Trojan Killer works in the field of system security to ensure safety for computer systems. We propose products to help you get rid of annoying adware, malware and other rough tools. It is very important to restore control on your computer as soon as possible and do not allow anyone to use your data.Additional Tools
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 1/03/2014 11:30:00 pm